Nepstok | Nepstok
December 2, 2021 NepstokLeaveaComment on पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर १६ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
November 18, 2021 NepstokLeaveaComment on चन्द्रमामा पृथ्वीको छाँया पर्ने गरि ५८० वर्षपछि भोलि लाग्दै छ सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण, कतिबेर रहन्छ ?
काठमाडौँ – आगामी मंसिर ३ गते करिब ६ शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ । नोभेम्बर १९ मा लाग्ने यो चन्द्र ग्रहण सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण हुनेछ । पछिल्लो ५ सय ८० वर्षमा पहिलो पटक यति लामो अवधिको चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ । यो पटकको चन्द्र ग्रहणमा चन्द्रमाको ९७ प्रतिशत […]
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेम -गीत ३’ चार करोड भारतीय आइसीमा भारतमा बिक्री
November 18, 2021 NepstokLeaveaComment on बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेम -गीत ३’ चार करोड भारतीय आइसीमा भारतमा बिक्री
काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेम -गीत ३’ चार करोड भारतीय आइसीमा भारतमा बिक्री भएको छ । फिल्मलाई ‘इम्पोसिबल फिल्म्स’ भारतले चार करोड भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको निर्माता सन्तोष सेनले बताए । उक्त कम्पनीले सन्तोषलाई बाँकी फाइदाको ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने छ । साथै अब भारतका थिएटर र ओटिटिको एमजीमार्फत प्रेम गीत प्रदर्शन हुने छ ।फिल्ममा […]
November 18, 2021 NepstokLeaveaComment on नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५२ रुपियाँ हुने !
काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगत छ महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको छ । हुन त भारतमाभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३० रुपियाँ सस्तो छ । नेपाली बजारमा लगातारको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता चर्को मर्कामा परेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमले भने मूल्यवृद्धि नभई समायोजन […]
November 18, 2021 NepstokLeaveaComment on विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द
नयाँ दिल्ली – वायु प्रदूषण बढेपछि दिल्लीका सम्पूर्ण विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले बुधबार यस्तो घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै, दिल्लीमा २१ नोभेम्बरसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य नगर्न भनिएको छ । तर, यातायात र रक्षासम्बन्धी निर्माण कार्यका हकमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन् । दिल्लीमा एक सातादेखि सरकारी […]
मंसिर २ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
November 18, 2021 NepstokLeaveaComment on मंसिर २ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) सामाजिक रूपले प्रसिद्दि र कीर्ति वृद्धि हुनुको साथसाथै व्यपारमा लाभ मिल्नेछ। विवाह गर्न उत्सुक व्यक्तिको सफलतापूर्वक विवाहको आयोजन हुनेछ। तर मध्यान्नपछि तपाईको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्ला। लगानी गर्नु अघि सोचविचार गर्नुहोला। वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) दिन […]
November 17, 2021 NepstokLeaveaComment on कोटेश्वरमा खाजा घर चलाउथे, १६ वर्षकी किशोरीलाई ब न्ध क बनाएर परपुरुषसँग पठाउँथे
काठमाडौ । काठमाडौंको कोटेश्वरमा खाजा घर संचालन गर्ने एक पुरुषवाट प्रहरीले एक किशोरीलाई उद्दार गरेको छ । कोटेश्वरस्थित नेवारी खाजा घरमा त्यसका संचालक ५२ वर्षीय नेत्रलाल ज्ञवालीले १६ वर्षकी किशोरी राखेका थिए । उनलाई ब न्ध क बनाएर परपुरुषसंग पठाउने गरेको खुलेपछि ज्ञवालीलाई पक्राउ गरीएको छ । किशोरीलाई गलत काममा लगाउने उद्देश्यले उनले लामो समय […]
November 17, 2021 NepstokLeaveaComment on आजदेखि लागूहुनेगरी घट्यो विद्युत महसुल दर, अब कति तिर्नुपर्छ ?
आज (मंसिर १ गतेदेखि) विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावअनुसार विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ महसुल दर लागू भएको हो । विपन्न नागरिकहरूलाई लक्षित गरी ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताहरूलाई इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँमात्र लाग्नेछ । मासिक ३० […]
श्रीमान दुबईमा भोकै,२महिने सुत्केरीले रुदै गरिन श्रीमान फर्काइदिन आग्रह । दुबइमा १२नेपाली अलपत्र( भिडियो)
November 17, 2021 NepstokLeaveaComment on श्रीमान दुबईमा भोकै,२महिने सुत्केरीले रुदै गरिन श्रीमान फर्काइदिन आग्रह । दुबइमा १२नेपाली अलपत्र( भिडियो)
दिनहुँ हजारौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारी अहिले थुप्रै नेपालीहरु जाने गरेका छन । वैदेशिक रोजगारिमा गएका उनिहरु त्यतिकै मात्रमा ठगी हुने गरेको खबर पनि आइरहन्छन । यस्तै घटना अहिले कैलालीका चन्द्रबहादुर बोहोरा सहित अन्य १२ जना नेपालिको दुबैम भएको छ । उनिहरु नेपालबाट गएदेखी भोकै बसिरहेको बताएका छन । उनिहरु केही समय अघि भिजिट भिसामा दुबै […]
November 17, 2021 NepstokLeaveaComment on यी नर्स जसले ५ हजार जनालाई सुत्केरी गराइन् तर आफै सुत्केरी हुँदा संसार छाडिन्